ट्रम्पको चिठी अर्दोआनलाई : म टर्कीको अर्थव्यवस्था बर्बाद पारिदिन्छु ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआनलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हिजो(बुधबार) सिरियामा कुर्दिसविरुद्ध हमला रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार ट्रम्पले अर्दोआनलाई मुर्ख नबन्न साथै यस्तो नगरे उनलाई इतिहासमा शैतानको रुपमा याद गरिने खतरा भएको बताएका छन् । ट्रम्पले अर्दोआनसँग सिरियाको विषयमा उनीसँग सम्झौता गर्न पनि अपिल गरेका छन् ।
सिरियामा टर्कीको हमलाको असर लाखौंमाथि परेको छ । १० जना भन्दा बढी कुर्दिस नेताबाहेक थुप्रै सर्वसाधारणले पनि ज्यान गुमाइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रले हमलाका कारण १ लाख ६० हजार विस्थापनका लागि बाध्य भएको बताएको छ ।
न्यूज एजेन्सीका अनुसार ट्रम्पले चिट्ठीमा अर्दोआनसँग भने, ‘तपाईं हज्जारौंको नरसंहारका लागि जिम्मेवार बन्न चाहनुहुन्नँ र म टर्कीको अर्थव्यवस्था बर्बाद गर्ने व्यक्ति बन्न चाहन्नँ । तर म के गरुँ ? यदि विवाद मानवतावादी तरिकाले सुल्झियो भने इतिहासले तिमीलाई राम्रो नेताको रुपमा हेर्नेछन् । तर राम्रो भएन भने तिमीलाई शैतानको रुपमा याद गर्नेछन् । त्यसकारण मुश्किल व्यक्ति नबन, मुर्ख नबन । म तिमीलाई पछि फोन गर्नेछु ।’
1:43 AM – Oct 17, 2019
अर्दोआनले अमेरिकी उपराष्ट्रपतिलाई भेट्न अस्विकार गरे
अमेरिकी मिडिया रिपोर्ट अनुसार टर्कीमाथि प्रतिबन्धको घोषणापछि नै अर्दोआन ट्रम्पसँग रुष्ट छन् । बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेन्स र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो उनीसँगको कुराकानीका लागि टर्की पुगे । यद्यपि, शुरुमा अर्दोआनले उनीसँग भेट्न अस्विकार गर्दै सिरिया मामलामा उनी ट्रम्पसँग मात्रै कुरा गर्ने बताएका थिए तर पछि उनले आफ्नो बयान फिर्ता लिए ।